विश्व इंजीलवादी Reinhard Bonnke मृत्यु | Apg29
विश्व इंजीलवादी Reinhard Bonnke मृत्यु
लाखौं आफ्नो सभाहरूमा भ्रमण र मान्छे सधैं स
धेरै मानिसहरू आफ्नो प्रवचन पछि सुरक्षित थिए र त्यसपछि उहाँले बिरामी लागि प्रार्थना गरे। त्यसपछि उहाँले फिर्ता व्हीलचेयर मा महिला आउछ, आफ्नो हात हल्कासित निधारमा राख्नु र त्यसपछि उनको यात्रा, र त्यो हिंड्न थाले।
Reinhard Bonnke मसीही संसारमा इंजीलवादी र प्रचारक थियो। उहाँले 1970 मा आफ्नो सुसमाचार काम थाले र ठूलो बासस्थानमा सभाहरूमा थियो। पछि, सभा बडा पायो जब उहाँले ठूलो क्षेत्र बाहिर सारियो। नाइजेरिया मा आफ्नो सभाहरूमा लाखौं भ्रमण गर्नुभएको थियो।
Reinhard Bonnke 79 वर्ष पुरानो थियो। तस्विर माथि 2014 देखि छ र विकिपीडिया बाट लिएको छ।
मान्छे सधैं सुरक्षित थिए
म Reinhard Bonnke केही समय र सधैं पायो मान्छे सुरक्षित एक प्रचार सुनेको छु। यसलाई कि विश्वास छ 75 लाख येशू ख्रीष्टको प्राप्त र आफ्नो सुसमाचार सेवा द्वारा सुरक्षित थियो!
उहाँले संसारभरि ठूलो पुनरुद्धार अभियान प्रचार, र एक इंजीलवादी रूपमा 60 वर्षसम्म काम गरे। धेरै पटक पनि Bonke स्वीडेन भ्रमण गर्नुभएको थियो। यहाँ पनि आफ्नो सेवाको माध्यम सुरक्षित मान्छे थिए।
धेरै वर्ष म Jönköping पेन्टेकोस्टल चर्चमा बाइबल स्कूल पेन्तिकोसमा गर्न जाँदा पहिले हामी पूर्वी युरोप मा एक वर्ग यात्रा मा भयो, तर एक stopover शहर हाम्रो बस यात्रा ह्यानओभर को समकालीन पश्चिम जर्मनी र अभियान र्याली मा Reinhard Bonnke सुने।
व्हीलचेयर मा महिला
धेरै मानिसहरू आफ्नो प्रवचन पछि सुरक्षित थिए र त्यसपछि उहाँले बिरामी लागि प्रार्थना गरे। त्यसपछि म एक व्हीलचेयर बसेर एक महिला देख्यो। उहाँले आफ्नो हात आइपुगेका थिए गर्नेहरूलाई मा, व्हीलचेयर मा त पनि महिला राख्नु, र त्यसपछि उहाँले गयो। म केहि भयो भने हेर्न धेरै ध्यान दिएर हेरे। तर केही भयो।
त्यसपछि उहाँले फिर्ता व्हीलचेयर मा महिला आउछ, आफ्नो हात हल्कासित निधारमा राख्नु र त्यसपछि उनको यात्रा, र त्यो हिंड्न थाले। हामी थिए यात्रा मा स्पष्ट स्तब्ध थिए र हाम्रो आँखा विश्वास गर्न सकिएन। म के उनको गलत थियो थाहा छैन, तर मलाई थाहा त्यो उठे र गए।
येशू ख्रीष्ट को लागि जित्यो लाखौं
स्वीडिश पेन्टेकोस्टल नेता दानियल Alm ट्विटर मा लिख :
"Reinhard Bonnke ख्रीष्टको लाखौं जित्यो। म उसलाई धेरै सराहना। उहाँले एक शास्त्रीय पेन्टेकोस्टल प्रचारक थियो। म बर्लिन, स्वीडेन मा उहाँको कुरा सुन्ने र रूपमा 2018 शान्ति मा हेल्सिन्की। आराम, श्री जस्तै लेट जब म सम्झना" ich बिन इंजीलवादी! " ।
आज, काम राम्रो आफ्नो इंजीलवादी प्रदर्शन पछि येशूको इंजीलवादी Reinhard Bonnke घर!